Abbaa seeraa fi barsiisaa Amantii Hailemichael Tadesse LTV irratti kiristaanummaa fi Irreechaan akka walitti hin buune luqqisa macaafa qulluu keessaa fudhatee ibsaa jira - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAbbaa seeraa fi barsiisaa Amantii Hailemichael Tadesse LTV irratti kiristaanummaa fi Irreechaan akka walitti hin buune luqqisa macaafa qulluu keessaa fudhatee ibsaa jira
Abbaa seeraa fi barsiisaa Amantii Hailemichael Tadesse LTV irratti kiristaanummaa fi Irreechaan akka walitti hin buune luqqisa macaafa qulluu keessaa fudhatee ibsaa jira.
Aadaa fi eenyummaa keessaniin waan boontaniif, kabajaa guddaa qabdu! Sabnu waan isaa jaalatu, galtuu alagaa hin ta’u!!
Abbaa seeraa fi barsiisaa Amantii Hailemichael Tadesse LTV irratti kiristaanummaa fi Irreechaan akka walitti hin buune luqqisa macaafa qulluu keessaa fudhatee ibsaa jira. Lubooni kunneen warra dhugaan galeefidha.
Jiraannu Ilmoo itti guddifna. Duunu itti awwaalamna. Homtuu nun dhaabuu sichi danda’ee❤